မန္တလေးတောသင်္ကြန်ဈေးတန်း ဆိုင်ခန်းခမူလသတ်မှတ်ဈေး ကျပ်ငါးသိန်းမှ ကျပ်နှစ်သိန်းသို့ လျှော?? - Yangon Media Group
မန္တလေးတောသင်္ကြန်ဈေးတန်း ဆိုင်ခန်းခမူလသတ်မှတ်ဈေး ကျပ်ငါးသိန်းမှ ကျပ်နှစ်သိန်းသို့ လျှော??
မန္တလေး၊ မတ် ၇- မန္တလေးမြို့ ကျုံးအရှေ့ရှိ တောသင်္ကြန်ဈေးတန်း တွင် ဆိုင်ခန်းဖွင့်လိုသူများ ဆိုင် ခန်းခများကို တစ်ခန်းလျှင် မူလ သတ်မှတ်ထားသည့် ငွေကျပ်ငါး သိန်းမှ ငွေကျပ်နှစ်သိန်းသို့ လျှော့ ချသတ်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာ ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
”ဆိုင်ခန်းခဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ တွေမှာ ဝေဖန်မှုတွေရှိတဲ့အတွက် အခုလိုမျိုး ငွေကျပ်သုံးသိန်းလျှော့ ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ အဓိကကတော့ ရောင်းချတဲ့အ စားအသောက်တွေပေါ်မှာ ဈေး မြှင့်မရောင်းချစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာစတင်လက်ခံတဲ့မနေ့ ကတုန်းက ဆိုင်ခန်းခငွေကျပ်ငါး သိန်းကိုပေးသွင်းသွားတဲ့ ဆိုင်ခန်း ရှင် ၂၇ ဦးအနေနဲ့ ငွေကျပ်သုံး သိန်းစီကို အခွန်ဌာန၊ ရာဖြတ်ဌာနခွဲမှာ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက် ဆက်သွယ်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းမှုရှိရေး၊စားသုံးသူတွေအ တွက် ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်စေရေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ရေးတို့အ တွက် တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာ ယာရေးကော်မတီဝင် ဦးကျော် ဇောအောင်က မတ် ၇ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ တောသင်္ကြန်ဈေး တန်းမှ ၁ဝ ပေပတ်လည်ဆိုင်ခန်း ၂၁၈ ခန်းကို ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် ချ ထားပေးကာ နေ့ညရောင်းချခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာအစား အသောက်ဆိုင်များ၊ ဒေသထွက် မြန်မာမှုအမှတ်တရလက်မှုပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်များနှင့်အတူ တော ရွာပွဲဓလေ့ကဲ့သို့ ရှေးဟောင်းဂန္ထ ဝင်ကားများကို ပြသမည့်ပိတ်ကား ထောင်ရုပ်ရှင်၊ မြန်မာ့ရုပ်သေးစင်၊ ကျောက်ဆည်ဆင်ကပွဲ၊ ခြင်းလုံးဝိုင်းဖွဲ့အလှခတ်ပွဲ၊ ချောတိုင်တက်ပွဲနှင့် သနပ်ခါးလူးပွဲတို့ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ခန်းရှင်များအနေ ဖြင့် ချမှတ်ထားသည့်စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းသို့ လိုက်နာမှုရှိမှ သာနောင်နှစ် ပွဲတော်များတွင် ဆက်လက်ရောင်း ချခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော် မတီမှသိရသည်။
မန္တလေးတွင် တစ်ကိုယ်တော် ဖျော်ဖြေပွဲ ပြုလုပ်သွားမည့် တင်ဇာမော်